I-Ofisi yeendaba - Isiseko soMvuzo -Uthando, isini kunye ne-Intanethi
Ikhaya Ofisi yeendaba
"Kuzo zonke izinto ezenziwa kwi-intanethi, iphonografi inamandla okuba likhoboka”Yitsho Izazinzulu zeDatshi. Ukuza kuthi ga ngoku, yonke into neuroloisifundo sobugcisa (ngaphezulu kwe-55) unika inkxaso kwi-intanethi ye-intanethi ngokufanelekileyo imodeli yoxhatshazo kubandakanywa ezisixhenxe ezibonisa ubungqina. Ngamanye amagama, susa iphonografi kwaye iimpawu ziyancipha okanye zikhuphe ngokupheleleyo.
I-Porn-Euctivated Erectile Dysfunction: Okukhona iphonografi iphakama, umngcipheko wokungasebenzi kakuhle kwe-erectile. Ngokujikeleze i-23% yamadoda angaphantsi kwe-35 aphendule kuvavanyo wayenenqanaba lokungasebenzi kakuhle kwe-erectile xa usabelana ngesondo neqabane.
Research yiBhodi yaseBritane yoHlelo lweeFilimu ifumene ukuba e-UK I-1.4 yezigidi zabantwana ngenyanga babukela iphonografi. Iminyaka elishumi elinesine okanye omncinci yayiyiminyaka yokuba i-60 ipesenti yabantwana baqale ukubona i-intanethi kwi-intanethi. Kwaye iipesenti ezingama-56 zabantwana abaneminyaka eli-11 ukuya kweli-13 ubudala banqwenela ukukhuselwa kwizinto ezingaphaya kwe-18's kwi-intanethi.
Siyalixabisa ixabiso leentatheli ukwenza uluntu ngokubanzi lwazi malunga nemingcipheko yokusetyenziswa kwe-intanethi ye-intanethi ngakumbi kubantwana. Siyavuya ukunceda naphi na apho kufanelekileyo ukubonelela ngophando, udliwanondlebe kunye nomxholo wamabali.
Eyona nto sigxile kuyo ngoku ziimpembelelo ze-intanethi kwimpilo yengqondo neyasemzimbeni, ubudlelwane, ukufikelela kwezemfundo kunye noxanduva olusemthethweni, ngakumbi ngokubhekisele kubantwana nakwishumi elivisayo.
Isiseko soMvuzo sivelise iseti yasimahla, edityanisiweyo izicwangciso zezifundo zesikolo Ulutsha oluneminyaka eli-11 ukuya kweli-18 ubudala malunga nomxholo wokuthumela imiyalezo nge-intanethi kunye ne-intanethi. Iyafumaneka e-UK, kwiinguqulelo zamanye amazwe kunye naseMelika.
free Isikhokelo sabazali kwi-Intanethi ye-Intanethi
Sikwanokuhlaziywa rhoqo, simahla Isikhokelo somzali ukuxhasa imfundo yosapho kunye neengxoxo malunga nemifanekiso engamanyala kunye nokuthumela imiyalezo ngefowuni.
Cinezela Iipakethe zeNkcazo yeOfisi
Ukuqinisekiswa kweminyaka yobudala
Ipakethi yethu yakutshanje yeOfisi yeendaba yeOfisi inika imvelaphi enzulu Kutheni imithetho yokuqinisekisa ubudala bephonografi iyimfuneko.
upapasho ndaba zekhampani yeNkomfa yokuQinisekiswa kweMinyaka, ngoJuni 2020.
Ingxelo yokugqibela yeNkomfa yokuQinisekiswa kweMinyaka eyi-2020.